Biden: "Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee cunsuri ah"
Musharaxa Madaxweynaha Mareykanka ee Dimoqraadiga Joe Biden ayaa Donald Trump ku calaamadeeyey inuu yahay cunsurigii ugu hooreeyey ee madaxweyne ka noqda dalka Mareykanka.
Biden, oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Barack Obama, madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee madow ah, ayaa ka jawaabayey su’aallo ay weydiinayeen shaqaalaha adeegga, gaar ahaan shaqaale caafimaad oo walaac ka muujiyey in Trump uu cudurka Coronavirus ugu yeeray “Fayruska Shiinaha.”
Waxa uu ku jawaabay isaga oo yiri “aad ayey xanuun u leedahay” sida Trump “uu ula dhaqmo dadka isaga oo u eegaya midabka jirkooda, asalka dhalashadooda, iyo halka ay ka yimaadeen.”
Waxa uu intaas ku daray “Madaxweyne xafiiska fadhiya weligiis ma sameyn tan. Maranaba, maranaba, maranaba. Madaxweyne Jamhuuri ah ma sameyn tan. Madaxweyne Dimqoraadi ah. Cunsuriyiin way jiree , wayna isku dayeen in loo doorto madaxweyne. Waa kii ugu horreeyey ee sidaas sameeya.”
Katrina Pierson oo la taliye u ah ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ayaa u jawaabtay Biden, ayada oo hadalladiisa ku sheegtay “aflagaado ka dhan ah caqliga cod-bixiyayaasha madow” sababtoo ah in Biden uu horey iula shaqeeyey sharci-dejiyeyaal aaminsanaa in dadka lagu kala saaro midab.